Ukuthenga e Munich ingenye ebaluleke kakhulu izivakashi ukuzijabulisa, kunezindlela eziningi Izitolo nge amanani ezingabizi. Bagcwala yegama lomkhiqizo izinto zingenzeka ukuthenga nge izaphulelo omkhulu futhi ukulondoloza okuhle. Lapha ungathola amakha multi-brand, izimonyo sokunethezeka, ubucwebe kanye nesimo izesekeli (izikhwama, amawashi nokuningi).
Uyini umahluko kusuka abakhwabanisi
Thatha uhambo ngomgwaqo, ungabona ukuthi ezitolo ngamanani ezifanele imikhiqizo izinga, kodwa akufanele kudidaniswe isitokwe-emakethe. Stock izimakethe, Isaphulelo izitolo ezithengisa we-German zinikeza izaphulelo omkhulu, okuyinto ngezinye izikhathi safinyelela ku-80% noma 90%. Futhi kunethuba ukuthenga izingubo ezisesitayeleni futhi imfanelo enhle izinto intengo rasprodazhnoy.
Izitolo bengafani namadreni futhi Isaphulelo kugxile ukuthi eqoqwe brand eziningana ngamanani ehlisiwe futhi kungenziwa eyethulwe Brands ahlukahlukene odumile amaqoqo lonke. Lapha avunyelwe zama isitayela efanayo izingubo, okwethulwa zonke izinhlobo abakhiqizi okukhethekile.
Adume kanye ngobukhulu esidayisa yezitolo
Lena akuyona nje enxanxatheleni yezitolo noma isikhungo, futhi idolobha elincane eliseduze Munich, Ingolstadt emzaneni esidayisa - omunye ethandwa kakhulu e-Munich. Itholakala enyakatho, km 75 kusuka edolobheni futhi isithinta kanjani insimu yalo engaphezu kuka-100 ezibizayo futhi ohlonishwa esidayisa boutiques. Amafasitela ezitolo agcwele Isaphulelo amaqoqo lemikhiqizo ezifana Escada, Versace, Nike, Puma, uRoberto Cavalli, Valentino et al.
Ububanzi likhulu kakhulu, futhi ukuhamba nge lokhu impahla zingase zephuze usuku, kodwa atholwe ajabule kusukela isaphulelo Amazing ivala ukukhathala. Lapho ukuthi insimu ugcwele amathilomu, izindawo zokudla nezindawo ezihlukahlukene iholidi.
Umgwaqo ngemoto enkabeni Munich kuzothatha cishe ihora. Ingolstadt emzaneni esidayisa livulekele amakhasimende nganoma yiluphi usuku, ngaphandle ngamaSonto, kusukela 10⁰⁰ ukuze 20⁰⁰. Lokhu edolobheni eningi ezintweni zokunethezeka yezitolo futhi yakhelwe VIP-amaklayenti, emnyango lapha yenziwa babo naye obukhetheke, pre-ibibhukelwe futhi ayitholakali kuwo wonke umuntu sihamba. Uma une ikhadi elinjalo, Ungeqela nabangane abambalwa futhi ujabulele ukuyothenga ngokusuka enhliziyweni.
On Tngolshtedter Strasse (Ingolstadt, 40) kuyinto esidayisa German Schustermann & Borenstein yokuxhuma. Lapha ungakwazi ukuthenga izingubo, amakha, izicathulo kanye izesekeli lemikhiqizo ezifana Charlotte, Olympia, Max Mara, uHugo S'khulu, uRoberto Cavalli, uCalvin Klein abase bekhulile, Escada, Laurel, Versace nabanye. Lena okukhethekile zasendlini shopping centre ngoba vip-abantu, emnyango lapha nge maqembu ekhethekile. I boutiques insimu yayo inikeza iqoqo olungekho ukudayiswa, futhi amamodeli we zonyaka odlule.
Ukuze uthole lapha kusukela maphakathi Munich ngemoto Kuyophakamisa isigamu sehora. Futhi, thatha ibhasi 140, 141, 177.
E Munich, ungathola ezimbili esitolo club, kanti eyesibili itholakala maphakathi ibhizinisi "Dornach" isakhiwo, Margaret Lai-Ring 33. Izitolo avulekele kuze 10⁰⁰ 19⁰⁰ avaliwe ngeSonto. Shayela kusukela enkabeni yedolobha ngemoto uthole e 30 imiz., Kanye ebhasini 263, 264.
Outlet Classic (Munich) itholakala empambanweni Leopold 20. Fashion brand kule esitolo Bathengisa at isaphulelo ukufika kuma-70%. Lokhu ibangelwa yokuthi ukuthenga zenziwa ngokuqondile, ngaphandle labalamuli. Ngaphezu kwalokho, inikeza amakhuphoni izitifiketi amabhonasi ukuthenga olandelayo. brand Sawubona ethandwa: Gucci URoberto Cavalli, LAMARTINA, ACDSee, Zara nabanye abaningi - zidayiswa at isaphulelo of 70%.
Uthola lapha ngemoto ingxenye yesine ihora ukusuka enkabeni, ibhasi 150, 154, N40, N41, N45 kanye ongaphansi komhlaba, iza Giselastraße esiteshini (Gisela emgwaqweni).
Izitolo Munich anemisila ukhululekile zokupaka, izindawo zokudlela, amathilomu. Sinenkosi eningi isikhala khulula, e-boutiques ochwepheshe zangempela kanye nochwepheshe ensimini yabo, wochwepheshe kanye consultants kuzokusiza ukukhethwa izinto ekupheleleni. Ububanzi mkhiqizo olusha kakhulu njalo, kusukela umfutho omkhulu futhi kukhona njalo into entsha. Yilezo zinto ungajahi emva yokuthengisa, abakushayi kufika ku-90% we amamodeli we angajwayelekile ezinobukhulu, imibala nezitayela. Ngakho abathengi nge okuthandwa engavamile noma, isibonelo, ubukhulu elincane izicathulo lapha uzothola bona inzuzo esiphezulu.
Yini ukuletha njengesipho: amathiphu ambalwa
Yini ukuletha kusuka Munich ngoba izingane? Izipho esimnandi kakhulu futhi ethandwa izingane ngeke Nutcracker imifanekiso futhi ithini amasosha ngezandla, kanye ngokuvakashela Izitolo, ungathola izingane lovely sika izingubo, izicathulo kanye amathoyizi.
Ukuze abangane bakho namalungu omkhaya okumnandi ephelele abadumile ayi Bavarian. Munich isoseji ezimhlophe babekhonza emasangweni ibhulakufesi, futhi babizwa weisswurst (vaysvurst) - isidlo yendabuko, okuyinto okuthengiswa zonke nezitolo ezinkulu nezindawo zokudlela, futhi ukudla ngezandla zakhe, elicwiliswe lwesinaphi amnandi.
Beer - kungcono brand owaziwa eJalimane, ukuthi likhiqizwa yonke indawo, emizaneni nasemadolobheni. Ukwenziwa ngokuvumelana zokupheka Bavarian lasendulo futhi ingenye ubhedu emhlabeni.
Futhi inketho lwesithathu: zokubhukuda bendabuko Bavarian, okuyinto igubha abadumile ubhiya festival.
Yini ukuletha kusuka Munich esithathwa abesilisa? Isipho ethandwa kakhulu - ke Yiqiniso, ubhiya mug. Lapha kuthengiswa ezingosini zazo zonke izitaladi kanye ezinguqulweni ezahlukene: ezenziwe ngesandla, ne Bavarian brand okunethezeka likabhiya, ukhuni ingilazi. Kuyinto azibizi kakhulu, futhi lesi sipho izobheka yimuphi ummeleli wobulili namandla. Futhi e esidayisa ethenga ungathenga elite Iphunga zabesilisa, umkhiqizo izesekeli, amawashi nemimoya, ezifana snaps, okuyinto eBavaria ukwenza nje emihle.
Ukuze esidayisa yezitolo amantombazane eJalimane kukhona enhle kakhulu engabizi multi-brand izesekeli:. Scarves, shawls, izigqoko, ubucwebe, mbumbulu ubucwebe Swarovski yangempela, kanye namakha ethandwa futhi imfashini, izimonyo nokunye N.
Zonke izindlu fashion European ivezwa eJalimane, esidayisa yezitolo, nokukhetha izinto eliyingqayizivele uphawu nje cwe. Abantu beze lapha esuka kulo lonke elaseYurophu ngenxa yokuthengisa isizini. Phakathi nale nkathi, izaphulelo ukufinyelela 90%.
Christmas Sale iqala Disemba 25 ngokushelela ku ebusika bese ihlala izinyanga ezimbalwa.
Summer ukudayiswa iqala ngezindlela ezahlukene, kodwa lokhu ngokuvamile July, August - ukuthi zingabantu izinyanga ezishisayo.
Lwathi luphela isizini amanani yokukhangisa kancane kancane baqala ukuvuka nokusimamisa, kodwa ngaleso sikhathi zonke izindlu kakade kuthengisiwe onobuhle zabo ehlisiwe namaqoqo.
Lo muzi esibili aphakeme kakhulu emhlabeni phambi kwezingelosi boutiques elite ngemva Berlin, futhi kubalulekile ziyeza ethenga ngaphezu kwesikhathi esisodwa. Sekuyisikhathi eside abantu baseYurophu kahle yezitolo isiJalimane, futhi izinkulungwane zabantu abathengi ezivela emhlabeni wonke kuba Munich. Ukuthenga (esidayisa njengoba ethengisa mkhuba esiyingqayizivele, igcizelela) kuletha ukonga omkhulu.
Amakheli ezitolo ezishibhile eMunich kanjani lapho
EBavaria, kukhona amaqembu Outlet izingane, ngoba amadoda, intsha, ngoba amantombazane. Lapha kukhona esihle eziphansi multi-brand izinto, izesekeli, izicathulo ukuze ivumelane yonke akuthandayo ngamanani akhokhelekayo. Zonke Izitolo Munich okunezinhlobonhlobo ezahlukene nemikhiqizo ukuthi ivezwa kuzo. Uma uthenga, ungakhohlwa ukuthatha amakhuphoni Isaphulelo namakhadi ezinikeza zonke izitolo.
Kids - Outlet (esidayisa izingane), Gayzelgastayg, 122, tram 15, 25, N 27, Großhesseloher Brücke uphethiloli (Omkhulu Ibhuloho Hesseloer), endleleni ngeke kuthathe imizuzu 30-35. kusukela maphakathi.
Stierblut Concept Store Abesilisa (esidayisa besilisa), le Sendlinger, 37, Sendlinger Strasse, Sendlinger Tor esiteshini komhlaba ( "Sendlinger Tor Gate").
Phendula Outlet Isitolo, Hofmann Strasse, 7 (Hofmann, 7), ibhasi 53, 136, N41, ongaphansi komhlaba Aidenbach Strasse (ukusakaza Aidan) kanye Obersendling.
Esidumile Exclusive Umklami Outlet, Pacelli Strasse, 5 (Pacelli, 5), Patsellishtrasse, tram 19, N 19, Lenbachplatz esiteshini, N41 ibhasi, N40, N45.
Triumph Factory Outlet, Mars Strasse 46 (st 46 Mars), ongaphansi komhlaba esiteshini "Hauptbahnhof" Shtiglmayerplats ibhasi 58, tram 20, 21, 22, N20, 16, 17, N16 stop "Hakkerbryukke".
Trachten Rausch (zokubhukuda Noise), Ruppert Strasse 32, umasipala "Poktsishtrase" ibhasi N40, N41 empumalanga. ßePoccistraße.
OSKA Outlet GmbH, Dirnismaning 34 amabhasi 290V, 293 (ost. "Dirnismaning", Haupt Strasse, 25) on the Münchener Strasse. Futhi uma ushayela kancane okwengeziwe, ukuvula Shlayskhaymer Strasse, liyofinyelela lapho boutiques ngaphezulu ezimbalwa: Kare Fabrikverkauf, Salomon / Wilson Outlet-Isitolo, G-Star RAW Outlet München, eduze kwazo Garching-Hochbrück esiteshini komhlaba ( "Garching-Hohbryuk" ), amabhasi 290, 292, 695, 219, Zonke Izitolo Munich isondelene komunye nomunye.
Gucci, TC Berpollinger, Neuhauser Str. 18, Metro München Karlsplatz ( "Munich Karlsplats"), ibhasi N40, N41, N 45, tram 20, 21, 22, N19, N20.
Belstaff, Strasse Maximilian, 16, Tram 19, N19, umasipala Marienplatz ( "Marinplats").
Zonke yezitolo kuvumelana nezimo, bonke Izitolo eJalimane zitholakala eduze iziteshi kamasipala futhi izithuthi zomphakathi. Lena kuphela ingxenye encane yimigwaqo Munich, eqinisweni they are phezu 50, futhi chithi saka kuleli dolobha.
Zonke Izitolo Munich zivuliwe ngoMsombuluko kuya kuLwesihlanu, ngempelasonto ngeSonto, evula amahora 10⁰⁰ ukuba 19⁰⁰, 20⁰⁰. NgeSonto azisebenzi neze, akukho ezitolo, ngisho nezitolo ezinkulu, ngakho-ke kuzomele uhlele yezitolo yakho ngesikhathi esisodwa, ikhumbula lokhu ehilelekile, futhi ushiye ngeSonto usuku indawo.
Heeled izicathulo - izici eyinhloko kusihlwa igqoka
QQ iwashi - nempilo ende Japanese kuzo zonke imodeli
Usuku lokuqala namathiphu guy nezeluleko.